မှားယွင်းနေသည်စိစစ် DMI ရေကူးကန်ဒေတာတဲ့အခါမှာကွန်ပျူတာကိုဘွတ်ဖိနပ် - WINDOWS ကို - 2019
မှားယွင်းနေသည်စိစစ် DMI ရေကူးကန်ဒေတာတဲ့အခါမှာကွန်ပျူတာကိုဘွတ်ဖိနပ်
တခါတရံမှာ CD / DVD ကို "DMI ကနေ Boot ကို" မဆိုအပိုဆောင်းအမှားမက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်မပါဘဲ "ဟုအဆိုပါသတင်းစကားကိုစိစစ် DMI ရေကူးကန်အချက်အလက်ပေါ်တွဲလွဲဆွဲထားစေခြင်းငှါသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် laptop ကို booting တဲ့အခါမှာ - ဤ Desktop ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု Interface နှင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုကဲ့သို့သောမှားယွင်းမှုတစ်ခုမဟုတ်ကပြောပါတယ်။ နှင့်ဒေတာများ check လုပ်ထားကြောင်း, BIOS ကို operating system ကိုစလှေတျ: တကယ်တော့, ထိုကဲ့သို့သောစစ်ဆေးမှုများကွန်ပျူတာစတင်အခါတိုင်း run ဖြစ်ပါတယ်, သို့သော်, ဒီအခိုက်မှာလှုပ်ရှားလာသောအခါဖြစ်ပေါ်ပါဘူး, အသုံးပြုသူပုံမှန်အားဖြင့်ဤသတင်းစကားကိုမမြင်ရပါဘူး။
ရိုးရှင်းစွာဒီလက်စွဲစာအုပ်ကိုသင်က Windows 10, 8, သို့မဟုတ် Windows 7, ပစ္စည်းကရိယာတွေရဲ့အစားထိုး reinstall လျှင်ဘာလုပ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်, ဒါမှမဟုတ်မသိသာအကြောင်းပြချက် System ကို Boot တက်စိစစ် DMI ရေကူးကန်မှာ Data message ကိုသက်ရောက်နှင့် Windows (သို့မဟုတ်အခြား OS ကို) start ဖြစ်ပေါ်ပါဘူးဘို့။
အဘယ်အရာကိုသင်၏ကွန်ပျူတာစိစစ် DMI ရေကူးကန်မှာ Data မှာဆွဲထားတဲ့လျှင်လုပ်ဖို့
အခြားရွေးချယ်မှုတတ်နိုင်ပေမယ့်အများစုကတော့ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်ပြဿနာက, HDD ၏ချွတ်ယွင်းခြင်းသို့မဟုတ် SSD ကို BIOS ကို setting များကိုဒါမှမဟုတ် Windows boot loader ကိုပျက်စီးမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းသင်တင်စိစစ် DMI ရေကူးကန်မှာ Data သတင်းစကားမှာရပ်တန့်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်လျှင်အထွေထွေလုပ်ထုံးလုပ်နည်း, ဖြစ်လိမ့်မည်။
သင်သည်မည်သည့်ဟာ့ဒ်ဝဲဆက်ပြောသည်ဆိုပါကမပါဘဲ Boot တက်စစျဆေးနှင့်ချိတ်ဆက်သည့်အခါ disc ကို (CD / DVD ကို) နှင့် flash ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
ပထမဦးဆုံး Boot တက်ကိရိယာ (အစား hard drive ကို၏သည် Windows 10 နဲ့ 8 များအတွက်ပထမဦးဆုံးစံကို Windows Boot ကို Manager ကဖြစ်ပါတယ်) အဖြစ်ကသတ်မှတ်ဖြစ်စေ, စနစ်ဖို့ hard disk ကိုပါလျှင် "မြင်နိုင်", BIOS ထဲမှာစစ်ဆေးပါ။ တစ်ဦး Boot တက် device ကိုအဖြစ်တချို့ကအဟောင်းတွေ BIOS ကို, သင်သာ (တော်တော်များများရှိပါတယ်လျှင်ပင်) က HDD ကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, (ထိုကဲ့သို့သော Hard Disk ကို Drive ကိုဦးစားပေး setting ကိုသို့မဟုတ်စသည်တို့ကိုမူလတန်းအရှငျဘုရား, မူလတန်း Slave အဖြစ်) ကို hard drive တွေ၏အမိန့်သတ်မှတ်သည့်အပိုဆောင်းအပိုင်း, များသောအားဖြင့်လည်းမရှိ, စနစ်ခက်ခဲဤအပိုင်းကိုအတွင်းပထမနေရာအတွက်မောင်းနှင်ကြောင်းသေချာအောင်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးမူလတန်းအဖြစ် မာစတာ။
, BIOS Reset (ငါ BIOS ကို reset ဘူးဘယ်လို။ ကြည့်ပါ) ။
သင်ကွန်ပျူတာ (ဖုန်မှုန့်များ၏သန့်ရှင်းရေး, etc) အတွင်း၌မည်သည့်အလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်လျှင်သင်တင်းကျပ်စွာချိတ်ဆက်နေကြသည်ဖြစ်စေ, အားလုံးလိုအပ်သောကေဘယ်လ်ကြိုးများနှင့်ပျဉ်ပြားချိတ်ဆက်ထားခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ အဆိုပါ drives တွေကိုနှင့် Motherboard ကမှအ SATA Cable တွေကိုအထူးအာရုံစိုက်။ ကဒ် (မှတ်ဉာဏ်, ဂရပ်ဖစ်ကဒ်, etc) ပြန်လည်ချိတ်ဆက်။
SATA ကိုသာ download လုပ်ရာအရပျကိုယူပြီးလျှင်စနစ် hard drive ကိုစွန့်ခွာခြင်းနှင့်စစ်ဆေးနိုင်ဖို့ကြိုးစားချိတ်ဆက်, မျိုးစုံချိတ်ဆက်မောင်းနှင်လျှင်။
ယင်းပြတ်ရွေ့သင်သည် Windows နဲ့ drive ကို install ချက်ချင်းပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်လျှင် BIOS ကိုပြသနေသည်, ထိုဖြန့်ဝေ, စာနယ်ဇင်း Shift + F10 (က command prompt ကို) မှ boot နှင့် command ကိုသုံးမှထပ်ကြိုးစားကြည့် bootrec.exe / FixMbrပြီးတော့ - bootrec.exe / RebuildBcd (သင်လည်း :. Windows7ကို Boot Loader ကို Restore, ကို Windows Bootloader ကို 10 Restore ကိုတွေ့မြင်, မကူညီဘူးဆိုရင်) ။
ပြီးခဲ့သည့်အချက်အပေါ်မှတ်ချက်: အချို့အစီရင်ခံစာများအရသိရသည်အမှားသင်က Windows ကို install ချက်ချင်းပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်ရှိရာကိစ္စများတွင်, ပြဿနာကိုလည်း "မကောင်းတဲ့" ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည် - ဖြစ်စေလမ်းဖြင့်, တစ်ဦးချွတ်ယွင်းကို USB-drive ကိုသို့မဟုတ် DVD ကို drive တခုဖြစ်တယ်။
အများအားဖြင့်, အထက်ပါ၏တစ်ခုခုပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေး, သို့မဟုတ်အနည်းဆုံး (ဥပမာ, ကျနော်တို့ BIOS ကိုကွန်ပျူတာက Hard drive ကိုမမြင်ရပါဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ရမှန်းရှာဖွေနေသည် hard disk ကိုမပြပါဘူးထွက်ရှာ) သွားခဲ့ရာထွက်ရှာရန်။
သင့်ရဲ့အမှု၌, ဒီအဘယ်သူအားမျှကူညီခြင်းနှင့် BIOS ကိုအရာအားလုံးထဲမှာမပါဘူးဆိုရင်, သငျသညျကွိုးစားနိုငျအချို့အပိုဆောင်းရွေးချယ်စရာသာမန်ကြည့်ရှုသည်။
ထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကသင်၏သားဘုတ်များအတွက် BIOS ကို update ကိုရှိပါက, (များသောအားဖြင့် OS ကို run နေမပါဘဲလုပ်မယ့်နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်) upgrade ကြိုးစားပါ။
(တစ်ဦးထက်ပိုလျှင်) အခြားဖြစ်လျှင်, ကွန်ပျူတာ၏ပထမဦးဆုံးပထမဦးဆုံး slot ကအတွက်မှတ်ဉာဏ်တစ်ခုချွတ်နှင့်စစ်ဆေးဖို့ကြိုးစားပါ။
အချို့ကိစ္စများတွင်ပြဿနာရှိသူများဖိစီးစရာမလိုဘဲတစ်ဦးပျက်ယွင်းနေ power supply ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်ကကွန်ပျူတာပထမဦးဆုံးအကြိမ်အပေါ်မလှန်နေသည်သို့မဟုတ်သူပိတ်ထားခဲ့သည်ချက်ချင်းပြီးနောက်ကဆိုပါတယ်အကြောင်းတရားများတစ်ခုထပ်တိုးအင်္ဂါရပ်ဖြစ်နိုင်သောပြဿနာများရှိခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါကွန်ပျူတာပါဝါထောက်ပံ့ရေးဖွင့်မည်မဟုတ်ဆောင်းပါးကနေအချက်များကိုအာရုံစိုက်။
အဆိုပါအကြောင်းပြချက်ကိုလည်းသင်ယခင်ကကြောင့်ပြဿနာမဆိုနိမိတ်လက္ခဏာများဖူးအထူးသဖြင့်လျှင်, အမှားများကိုအဘို့သင့် HDD စစျဆေးဖို့သဘာဝကျပါတယ်, တစ်ဦးချွတ်ယွင်း hard disk ကိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ထိုပြဿနာကိုအပ်ဒိတ် (သို့မဟုတ်ဥပမာ, အဘယ်သူမျှမလျှပ်စစ်မီး) အတွင်းအတင်းအကျပ်ပိတ်ပြီးနောက်ကွန်ပျူတာဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဆိုလျှင်, သင်၏ system နှင့်အတူဖြန့်ဖြူးခြင်းမှ booting ကြိုးစား, (ဘာသာစကားရွေးချယ်ရေးပြီးနောက်) ဒုတိယ screen ပေါ်မှာ, စာနယ်ဇင်းအောက်ခြေ "Restore System ကို" နှင့်မရရှိနိုင်လျှင်, Restore point တစ်ခုကိုသုံးရန်ကျန်ကြွင်း ။ Windows 8 ကို (8.1), နှင့် 10 ၏အမှု၌, သင် system ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းကြိုးစားနိုင် (ဤနေရာတွင်အဆုံးစွန်သောနည်းလမ်းတွေ့မြင် :. ငါဘယ်လို Windows 10 ကို reset ပါဘူး) ဒေတာကယ်တင်တော်မူ၏။
ငါအဆိုပြုထားအချို့စိစစ် DMI ရေကူးကန်မှာ Data မှာရပ်တန့်တင်ပြုပြင်ပြီး system ကိုဝန် fix ကိုကူညီနိုင်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းမျှော်လင့်ပါတယ်။
ထိုပြဿနာကိုဆက်ရှိနေသေးပါကသူ့ဟာသူတငျပွဘယ်လိုမှတ်ချက်များအတွက်အသေးစိတ်ဖော်ပြရန်ဖို့ကြိုးစား, ပြီးတော့သူကဖြစ်ပျက်မှစတင် - ငါကကူညီရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။